Musharrax looga reebay ka mid noqoshada Baarlamaanka cusub ee Galmudug si la yaab leh! | HalQaran.com
Home Wararka Maanta Musharrax looga reebay ka mid noqoshada Baarlamaanka cusub ee Galmudug si la...
Dhuusamareeb (Halqaran.com) – Ibraahim Xasan Cawaale oo ka mid ah aqoonyahanada ka soo jeeda Galmudug ayaa waxaa si layaab leh looga reebay tartan uu u geli lahaa Baarlamaanka Galmudug, ka dib markii lagu soo eedeeyay inuu sawir la galay mid ka mid ah siyaasiyiinta mucaaradka.
Ibraahim Xasan Cawaale oo ah sharci yaqaan, waxna ka qoray nidaamka federaalka ayaa loo sheegay in laga reebay tartankii uu u geli lahaa Baarlamaanka, ka gadaal markii loo sheegay in uu sawir la galay Xildhibaan Axmed Macalin Fiqi, oo ka mid ah Xildhibaanada Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Soomaaliya.
Ka hor inta aan lagu dhawaaqin liiska lagu soo bandhigay maalintii Jimcaha inta badan Xildhibaanada Baarlamaanka Galmudug ayaa waxaa jiray tartan ay musharaxiinta qaarkood u galeen ka mid noqoshada Baarlamaanka.
Ibraahim Xasan Cawaale oo deegaan ahaan ka soo jeeda Magaalada Ceelbuur ee Gobolka Galgaduud ayaa ka mid ahaa tiro musharaxiin ah oo u taagnaa mid ka mid ah kuraasta deegaan doorashadoodu tahay Ceelbuur, wuxuuna sheegay in iyadoo aan doorashada kursigaasi la guda gelin loo sheegay inuu ka tirsan yahay mucaaradka, taasina ay cadayn u tahay sawirka uu la galay Xildhibaan Fiqi.
Sidoo kale, wuxuu sheegay inaanay jirin aqoon gaar ah oo kala dhaxeysa Mudanaha Golaha Shacabka ka tirsan, sidoo kalena ka mid ah siyaasiyiinta mucaaradka ee ku jira Madasha Xisbiyada Qaran.
“Aniga iyo Xildhibaan Fiqi majirto aqoon rasmi ah oo naga dhaxeyso, maalinta aan Wada galnay sawirkaan waxay ahayd horaantii sanadkii tagey ee 2019, waqti aan kuwada kulanay Hotel Dayax, galab lagu qabanayay xaflad lagu soo bandhigayay buug u qoray Cabdicasiis Xildhibaan, kaasoo ka sheekeynayay taariikh nololeedka Xildhibaan Gaafow. Xildhibaan Axmad Macalin Fiqi galabtaas waxa uu tagey hotel ay u badan yihiin taageereyaasha Ra’iisul Wasaare Khayre, waxa uu ka qaybgalay xaflad loo qabanayay Xildhibaan taagero weyn u ah Ra’iisul Wasaare Khayre. Taasi waxay kuu cadaynaysaa inuu yahay nin ay u kala Soocan tahay ismaanshaafka siyaasadeed & iskaashiga bulsho.” Ayuu yiri Ibraahim Xasan Cawaale oo warkan ku sheegay qoraal uu soo dhigay bartiisa Facebook.
Waxa kaloo uu yiri “Taas cagsigeed qolooyinkii u qaabilsanaa Xukuumadda xulista Xildhibaanada waxay kala Saari waayeen qofka qaba Fekerka mucaaradka iyo sawir lala galo qof mucaarad ah. Waxaa leygu tixgalin waayay xaqa aan u leeyahay in aan tartamo, waxaa leygu tixgalin waayay in Aan ahay ruux jecel dowlad wanaagga, waxaana leygu tilmaamay nin laga helay Aayatul Munaafaq, taasoo ah sawirka aan la galay Xildhibaan Axmad Macalin Fiqi.”
Xildhibaan Fiqi ayaa sheegay in uu ka xun yahay sida loola dhaqmay Ibraahim Xasan, sababo ku aadan sawirka ay ku wada galeen Hotel Dayax ee Magaalada Muqdisho.
“Saaxiibkey Ibraahim Xasan Cawaale waa ka xumahay waxa kugu dhacay iyo sida laguula dhaqmay, oo laguu garab marsiiyay Xildhibaanimadii aad musharaxa u aheyd, weliba sawir aad ila gashay aad eersatay.” Ayuu yiri Fiqi oo hadalkan ku sheegay qoraal uu dadka kula wadaagay bartiisa Facebool.
Ugu dambeyn, dowladda dederaalka ayaa marar badan lagu eedeeyay inay lafdhabar u tahay khilaafka ragaadiyay geed-socodka doorashada lagu wado inay ka qabsoomto Magaalada Dhuusamareeb.
nin looga reebay xildhibaanada baarlamaanka Galmdugu sawir uu la gelay xildhibaan fiqi